[Topnews:-] Beesha Caalamka oo Madaxweyne Garguurte ku qasabtay inuu ka laabto magacaabidda gudiggii doorashadda -Damujadiid ?
Tuesday June 21, 2016 - 23:28:27 in Articles by Super Admin
Waagacusub.net - Asxaabta Isbaheysigga Xisbiyadda Siyaasadda Somalia ayaa guluf dheer kadib ku guuleeystay iney fashiliyaan gudiggii u badnaay kooxda Damujadiid ee Madaxweyne Garguurte todobaadkii hore magacaabay.
Madaxda Isbaheysigga Xisbiyadda ayaa shalay kulan xasaasiya la yeeshay diblomaasiyiinta beesha Caalamka iyagoo u sheegay ineysan doorasho ka dhaceeyn Somalia haddii uusan Madaxweyne Xasan si degdega uga laaban guddi ku sheega uu magacaabay ee golaha Wasiiradda garabka kooxdiisa Urur diimeedka Damujadiid.
Diplomaasiyiin ka tirsan Safaaradaha Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa madaxda Asxaabta Xisbiyadda siyaasadda u sheegay ineysan aqbali doonin gudiggaas uu Madaxweyne Xasan magacaabay sidaas darteedna uu ka ballanqaaday inuu uga laaban doono kulanka ugu horeeya ee madasha wadatashiga ku yeelanayaan Baydhabo.
Gudigga la magacaabay oo ah Wasiiradda Damujadiid waxaa madax looga dhigay Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Federalka Somalia Cabdiraxmaan Odowaa oo shacabka Soomaaliyeed u bixiyeen Saqiirka Damujadiid.
Sikastaba ha ahaatee ,waxaa muuqata inuu fashilmay Madaxweyne Garguurte mar haddii lagu qasbay inuu ka laabto gudiggii uu magacaabay ee rajadda uu ka qabay iney xukunka ku soo celiyaan.